co.cc မှာ byethost.com နဲ့ setting ချချင်တယ် — MYSTERY ZILLION
co.cc မှာ byethost.com နဲ့ setting ချချင်တယ်
November 2008 edited February 2009 in Blog
ကျွန်တော့မှာ byethost.com နဲ့ အကောင့်တစ်ခုလုပ်ထားတယ်။
ြ့ပီးတော့ co.cc မှာ domain တစ်ခု ယူလိုက်ပြီးတော့ setting ချတာ မရဘူးဖြစ်နေတယ်
ကျွန်တော် www.000webhost.com(ဟုတ်လားမသိဘူး) ကနေလုပ်ချင်ဘူး။
byethost.com ကမလွယ်လောက်ဘူးထင်တယ် ကျွန်တော်လည်းလုပ်ကြည့်ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် အဆင်မပြေဘူး co.cc ကဘာဖြစ်လို့ လဲပြောကြည့်လေ ဖြေပေးပါ့မယ်
ကိုblackthorn က hosting ကို www.000webhost.com နေရာမှာ byethost.com ကို သုံးချင်တာလေ။ co.cc ကို ပြောတာမဟုတ်ဘူး။
ကျွန်တော်စိတ်ထင် hosting အတွက်က သိပ်မကွာဘူးထင်တယ်။ byethost ကလည်း www.000webhost.com အတိုင်းပဲ ဖြစ်မှာပါ။ သဘောတရားတွေကတော့ အတူတူပဲလေ။ စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ မသုံးဖူဘူး။
byethost.com မှာ အကောင့်တစ်ခုဆောက်ပြီးပြီဆိုတော့ ဘလော့ကော ဆောက်ပြီးပြီလား။ ဆောက်ပြီးပြီလို့ ယူဆလိုက်မယ်နော်။ တစ်ခုခုတော့ ရှိမှာပေါ့ ဥပမာ၊ blackhorn.iblogger.org ဆိုတာလိုမျိုးပေါ့။ အဲဒီလိပ်စာ အတိုင်းရိုက်ရင် (ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ အတိုင်းပေါ့ဗျာ) ဘလော့လဲတက်နေပြီလို့ ယူဆလိုက်မယ်။
co.cc web site ကိုသွား။ကိုယ်ယူထားတဲ့ အကောင့်နဲ့၀င်လိုက် URL Forwarding ဆိုတဲ့ လင့်ကိုနှိပ်လိုက် ။ နောက် Redirect To : ဆိုတဲ့ နေရာမယ် ကိုယ့်ရဲ့ byethost မှာဆောက်ထားတဲ့ ဘလော့လိပ်စာကိုထည့် ဘာညာသာရကာ နေကြာကွာစိ ဖြည့်ခိုင်းတာလေးတွေဖြည့်။ ပြီးသိမ်းလိုက်ရင် ရပြီဗျာ။
နောက် IE ကနေ blackhorn.co.cc (ကိုယ်ယူထားတဲ့ နာမည်ပေါ့ဗျာ) ရိုက်လိုက်ရင် byethost မှာဆောက်ထာတဲ့ လိပ်စာက ဘလော့ကို မြင်ရမယ်ဖြစ်ပါကြောင်း။
အဲ မသိလို့ တစ်ခု မေးမယ်နော်။ ဖရီးခြင်း အတူတူဆို byethost.com နဲ့ 000webhost.com က ဘာကွာလဲ။ ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ.....
မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ သူအပေါ်မှာ co.cc ကမှားနေတယ်လို့ပြောလို့ မေးတာပါ ကျွန်တော်ကတော့ ooowebhost.com ကကောင်းတယ်ထင်တယ် ဟို byethost ့က register ပေးမလုပ်လို့မသိခဲ့ရပါဘူးဗျား နောက်တစ်ခုလည်းကောင်းသေးတယ်ဗျ
အဲဒါက freehostia.com ပဲဖြစ်ပါတယ်
ဒါဆို freehostia.com နဲ့ 000webhost ကရော ဘာကွာလဲ......
ကိုyeman ပြောတာမှန်တယ် ကိုGipsyရေ
ကျွန်တော်byethost.com ထဲကို SQL database ဆောက်ချင်တာပါအစ်ကို။
ကျွန်တော်က Redirect to မလုပ်ချင်ဘူးအစ်ကို။
အစ်ကို gipsy.co.cc ကိုဘယ်လိုဆောက်သလဲဆိုတာ အသေးစိတ်လေးသိချင်ပါတယ်။
ဟုတ်အစ်ကိုရေ ကျွန်တော့် လိပ်စာက www.gipsy3.co.cc ဖြစ်ပါတယ် (ပိုက်ပိုက်မတက်နိုင်လို့ ဖရီးပဲသုံးတာပါ)
ပြီးတော့ ကျွန်တော် ပြောင်းတာကို မောင်နေ့မီးအိမ်မှ သင်ပေးတာပါ နောက်တော့ ကျွန်တော့် ဟာ ကျွန်တော် ပြန်လုပ်နေတော့ ရသွားပါတယ် အစ်ကို အသေးစိတ်ဖတ်ချင်ရင်တော့ ဒီမှာ သွားဖတ်လို့ရပါတယ်
ဘာကြောင့် မစမ်းလဲဆိုရင်ကျွန်တော် blogspot ကိုမကြိုက်လို့ပါ။
wordpress နဲ့ joomla ကိုပဲကြိုက်လို့ပါ။
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် gispy ရေ
ပေးထားတဲ့ link လေးကလဲ တကယ်အသုံး၀င်ပါတယ်။
ဖြေပေးကြသော mz က ဘော်ဘော် များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အစ်ကိုရေ ဘာမှ မလုပ်ရသေးဘူး
Website datthanakoko.co.cc has been successfully installed on server.
- If you need help, please check our forums and and FAQ List.
Do not waste your time with 000webhost.com, if you are going to upload any illegal website here! All content is manually reviewed by humans, so if we will detect anything illegal, your account will be terminated. So don't waste your time in promoting your scams, hacking websites, or anything else malicious - your account will be terminated in5minutes after we will receive first abuse report or anything abusive will be detected by our staff. We also report all illegal activity to the local and international authorities.
default.php 8KB Jan 23 2009 12:07:03 AM
just-d-test.html 0KB Jan 24 2009 09:58:53 PM
အဲဒီမှာတင်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ မသိတော့ဘူး..ဘလော့လည်းမဆောက်တက်တော့ သူများဟာပဲ ယူသုံးမယ်...ဘာတွေဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ...လူပိန်းနားလည်တဲ့နည်းလေးနဲ့ ရှင်းပြပေးပါလား
အကိုရေ မ၈်လာပါ..mmwroldpress .pdf အထဲကအတိုင်းလုပ်ကြည့်တာ..wordpress2.5.1 installation wizard က path မှာ / ထားတာကိုလက်မခံဘူး..ဘယ်လို့လုပ်ရမလဲ:((:((
wordpress သုံးမှာဆိုရင် upload တင်လိုက်လေ......ftp အတွက် firefox add-on ဖြစ်တဲ့ fireftp ကိုသုံး.........ftp ကိုသုံးပြီး......public_html ဆိုတဲ့ folder ထဲကို wordpress ထဲက file တွေကို upload တင်လိုက်ပါ ။ file တွေအကုန် upload တင်ပြီးသွားရင် အစ်ကို blog address ကို browser ကနေပြန်ခေါ်လိုက် ၊ အဲဒီမှာ wordpress ကို intall လုပ်ဖို့ပြောလိမ့်မယ် ။ အဲဒီကနေ အဆင့်ဆင့်လုပ်သွားလိုက်ရင်ရပါပြီ။
FTP ဒေါင်းပြီးတော့ install လုပ်တယ်..ftp က ဆက်သွယ်လို့မရဘူး no connect ဖြစ်နေလို့ပါ..
ကျွန်တော်ဆီမှာလည်းတစ်ခါတစ်လေဖြစ်တယ်....ဒါပေမဲ့ခဏပဲဖြစ်တာပါ.....connectပြန်လုပ်လို့ရပါတယ် ။တစ်ခါတစ်လေတစ်ခြားကွန်ပြူတာတစ်လုံးကနေconnectလုပ်ရင်ရတတ်တယ်။ကွန်နက်ရှင်ကြောင့်လို့တော့ထင်တာပဲ..........အဲဒါကိုကျွန်တော်လည်းသေချာမသိဘူး ။ ftp user name၊ password တွေရောမှန်ရဲ့လား ပြန်စစ်ကြည့်ပါအုံး ။ ftp password ကမသုံးတာကြာ ရင် auto change တယ်ထင်တယ် ။ ကျွန်တော့်ဆီမှာ password အလိုလိုပြောင်းသွားတာနှစ်ခါရှိပြီ ။ hosting site မှာပြန်ကြည့်ရင် password ကအသစ်ဖြစ်နေတတ်တယ် ။ကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်